Ukusetha kwakhona kunye nokubuyisela i-iPod yakho
Ngokuqinisekileyo ngekhe umangaliswe kukufumanisa ukuba, xa kunokwenzeka ukuba i-iPod yakho idideke okanye iyala ukuvula, ungayilungisa ngokuyiseta kwakhona kwaye uqalise kwakhona inkqubo-njengeekhompyuter kunye nezinye ii-iPod. Ukuseta kwakhona kuyenzeka hayi buyisela i-iPod touch kwimeko yayo yasefektri, kwaye ayicimi nto-umxholo wakho kunye noseto zihlala zihleli.
Ukuseta kwakhona i-iPod touch, chukumisa kwaye ubambe iqhosha lokulala / lokuvuka kunye neqhosha lasekhaya ngaxeshanye imizuzwana eyi-15, ukungahoyi isilayidi esibomvu kuMandla okucima isilayida, de kube kuvela ilogo yeApple.
Emva kokuba usete kwakhona i-iPod touch, yonke into kufuneka ibuyele esiqhelweni, kubandakanya umculo kunye neefayile zedatha.
Ukusetha kwakhona useto lwakho lwe-iPod
Ungaseta kwakhona zonke okanye iinxalenye zoseto lwakho lokuchukumisa i-iPod ngelixa ushiya umxholo wakho kunye nolwazi lomntu buqu. Ukubona ukhetho lwakho lokusetha kwakhona, khetha Useto → Ngokubanzi → Ukuseta kwakhona kwiscreen seKhaya (ukuseta kwakhona kumazantsi escreen ngokubanzi). Ukusetha kwakhona isikrini kuvela kwezi ndlela zilandelayo:
Hlaziya lonke useto: Ukubuyisela i-iPod touch kwimeko yayo yantlandlolo ngaphandle kokukhetha okanye useto ngelixa ugcina umxholo wakho okanye ulwazi lwakho (kubandakanya abafowunelwa, iikhalenda, kunye neeakhawunti ze-imeyile) zihambile, cofa Cwangcisa Zonke iiSeto.
Cima konke okuqulathiweyo kunye nezicwangciso: Ukucima yonke into, qala uqhagamshele iPod touch kwikhompyuter yakho okanye iadaptha yamandla, emva koko ucofe ucime yonke imixholo kunye neeSetingi. Lo msebenzi ungathatha ixesha, kwaye awukwazi ukusebenzisa i-iPod touch de igqibe.
Hlaziya useto lweNethiwekhi: Ungacwangcisa useto lwenethiwekhi ukuze iinethiwekhi zakho ezisetyenzisiweyo ngaphambili zisuswe kuluhlu lweWi-Fi. Olu hlobo lokusetha kwakhona luncedo ukuba awufumani nayiphi na enye indlela yokumisa inethiwekhi ye-Wi-Fi ekuxhumeni ngokuzenzekelayo kwi-iPod touch yakho - thepha nje ukusetha kwakhona izicwangciso zeNethwekhi, kwaye unqanyulwe ngokuzenzekelayo kunoma iyiphi inethiwekhi ye-Wi-Fi. (IWi-Fi icinyiwe kwaye emva koko ibuyile.)
Hlaziya kwakhona idikshinari yekhibhodi: Ukuseta kwakhona isichazi-magama sekhibhodi, cofa Cofa kwakhona kwiDikhibhodi. Oku kususa onke amagama afakelwe kwisichazi-magama. (Amagama ayongezwa xa uwalahla amagama acetyiswe yikhibhodi ekwiskrini kwaye uchwetheze igama.)
Misela kwakhona ubeko lweScreen seKhaya: Ukuba uhlengahlengise ii icon kwiscreen sakho seKhaya, unokufuna ukuseta kwakhona kwizikhundla zabo zoqobo. Ukuseta kwakhona isikrini sakho sasekhaya kulungelelwaniso olungagqibekanga, cofa Cwangcisa ubeko lweScreen seKhaya.
Misela kwakhona indawo kunye nokuBucala: Ungacwangcisa kwakhona indawo okuyo kunye noseto lwabucala ngokuthepha ukuseta kwakhona indawo kunye nemfihlo.
Ukuseta kwakhona i-iPod nano kunye ne-iPod classic
Ukuseta kwakhona i-iPod nano, cinezela iqhosha lokulala / lokuvuka kunye neqhosha lasekhaya kwimizuzwana emithandathu, de kube kuvela ilogo yeApple.
Ukusetha kwakhona i-iPod classic, landela la manyathelo:
Qhoboshela iswitshi yokubamba.
Silayida iswitshi sokubamba ngasekunene, ubonise umaleko weorenji, ukutshixa amaqhosha, emva koko uwutyibilikise umva kwakhona.
Cinezela iMenyu kwaye ukhethe amaqhosha ngaxeshanye kwaye ubambe okungenani imizuzwana emi-6 okanye kude kuvele ilogo yeApple; emva koko ukhulule amaqhosha xa ubona ilogo yeApple.
Ukuvela kwemiqondiso yelogo yeApple yokuba i-iPod yakho iyazicwangcisa kwakhona, ngenxa yoko akusafuneki ubambe amaqhosha.
Ukukhupha iMenyu kwaye ukhethe amaqhosha ngokukhawuleza xa ubona i-logo ye-Apple. Ukuba uqhubeka nokucinezela amaqhosha emva kokuba ilogo ivele, i-iPod ibonisa uphawu lwebhetri esezantsi, kwaye kufuneka uyixhume kumthombo wamandla ngaphambi kokuyisebenzisa kwakhona.
Ukuseta kwakhona i-iPod nano okanye i-iPod useto lwakudala, khetha Useto → Hlaziya useto olusuka kwisikrini sasekhaya se-iPod nano okanye imenyu ephambili ye-iPod, emva koko ukhethe ukuseta kwakhona (okanye Rhoxisa ukurhoxisa). Oku kuseta kwakhona zonke izinto kwimenyu yezicwangciso kuseto lwazo olungagqibekanga.
Ukusetha kwakhona i-iPod shuffle
Ukusetha kwakhona i-iPod shuffle, qala uyikhuphe kwikhompyuter yakho (ukuba awukenzi njalo) kwaye emva koko usilayide iswitshi sokuma kwindawo ezintathu kwi-Off position. Umtya oluhlaza phantsi kotshintsho akufuneki ubonakale. Linda imizuzwana emi-5 emva koko utshintshe isilayida ubuyisele kwiiShuffle zeeNgoma okanye Dlala kwindawo yoku-Odola.
Emva kokusetha kwakhona, yonke into kufuneka ibuyele esiqhelweni, kubandakanya umculo kunye neefayile zedatha.
Uluhlu lwe-antipsychotic atypical
vula ivolumu kwifowuni
i-azithromycin isetyenziselwa ukunyanga
iziphumo ze-orencia zokufumana ubunzima
Amafutha amiselweyo e-eczema